tsy azo esorina ilay teny manodro ny toerana onenana. Fitodika mpamari - toe - javatra Fameno toe - javatra toerana Toe - javatra Fameno zoina Fitodika zoina
asa fameno toe - javatra toerana nefa tsy tokony hafangaro amin ny fameno zoina tsy mivantana. Ao amin ny fitsipiteny mahazatra dia tsy misy fanavahana
Io mpisolo tena fameno io dia mety hitana anjara asa fameno zoina mivantana na fameno zoina tsy mivantana izay manondro ny olona na zavatra tondroin ny
fehezanteny faharoa. Ao amin ny fehezanteny hoe Maty ny alika dia lazaina ny teny hoe alika fa tsy mpanao. Zoina Toe - javatra Fitodika mpanao Fameno mpanao
tsinjara asa tsy tena ilain ny matoanteny hameno ny heviny, tsy tahaka ny zoina atao na iharana Amin ny fiteny maro dia misahana ny anjara asa fameno
iray amin ireo tsinjara asa ireo no miteraka ny atao hoe fitodika sampana. Ny fameno zoina dia famenon ny matoanteny izay tsy azo sarahina aminy na afindrafinfdra